Fampisehoana mampiaraka an'i Netflix, 'Biby mahafatifaty' manafina ireo takelaka jamba ao anaty makiazy Prosthetic Monster
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny seho mampiaraka an'i Netflix, ny 'Biby mahafatifaty' dia manafina ireo takelaka jamba ao anaty makiazy Prosthetic Monster
Ny seho mampiaraka an'i Netflix, ny 'Biby mahafatifaty' dia manafina ireo takelaka jamba ao anaty makiazy Prosthetic Monster
by Trey Hilburn III Jona 23, 2021
Izahay dia efa variana tanteraka amin'ity andian-dahatsoratra mampiaraka Netflix ity. Matetika isika dia tsy hahita fampisehoana mampiaraka, vaovao mifandraika amin'ny horohoro, fa amin'ity tranga ity dia! Ireo mpitovo amin'ity andian-dahatsoratra jamba ity, mitondra ny lohanteny Biby mamy dia mody misaron-tava daholo, makiazy fivarotan-tena amin'ny alàlan'ny datin'izy ireo ary tsy avela hampiseho ny tena endrik'izy ireo hatramin'ny farany. Averina indray fa efa variana isika
Ny hevitra ao ambadiky ny vaovao Netflix andian-daty mampiaraka, dia mandray ilay hevitra hoe “ny hatsarana dia lalina ihany amin'ny hoditra”, amin'ny hevitra vaovao mahavariana. Izy ireo dia mahatratra izany amin'ny alàlan'ny fampiharana ny mpivaro-tena amin'ny tokan-tena miankina amin'ny toetra amam-panahy. Avy eo dia ampitahaina amina mpitovo iray hafa izay miova endrika amin'ny mpivarotena koa izy ireo ary alefa daty hijerena raha mahita tena fitiavana. Raha olona lavorary mipetraka eo akaikinao io, hendry amin'ny toetra nefa nitafy toy ny scarecrow na vahiny, azo atao ve ny manilika ny endrika ivelany ary mifankatia?
Ny synopsis ofisialy ho an'ny borikidia, Biby mamy mandeha toy izao ny andiany:
Manantena ny hanao veloma ny mampiaraka tsy misy fotony, ny fanatanjahan-tena momba ny tokan-tena amin'ny fiainana an-tany dia manamboatra makiazy sy mpivaro-tena mba hametrahana fitsapana simika tena izy.
Mahafinaritra tokoa ny makiazy! Ny tokan-tena tsirairay dia toa ny teo amin'ilay andian-tantara mifototra amin'ny vokatra, Mifanatrika. Efa variana amin'ity seho ity aho noho ny antony maro. Jamba tokoa ve ny fitiavana? Izaho manokana dia ho raiki-pitia amin'ireo mpanakanto miasa amin'ny andiany. Ireto prothetics ireto dia sangan'asa kanto avokoa.
Biby mamy tonga ao amin'ny Netflix ny 21 Jolay ary maty izahay hijery.
Ahoana ny hevitrao? Biby mamy? Mieritreritra ve ianao fa afaka manilika ny hatsaran-tarehy ary mianjera amin'ny olona toa totozy? Azonao atao ve ny manilika ny hatsaran-tarehy? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra. Lazao aminay ihany koa ny hevitrao momba an'io mihoatra ny tranofiara sy andiana bibidia.
Miampita amin'ny tranofiara vaovao ihany i Scooby-Doo sy Courage. Jereo eto, eto.
Ny Trailer tamin'ny Jolay tamin'ny volana Jolay dia nanasongadina ny 'Tantara mampihoron-koditra mahazatra,' 'Milk pulpderder Milkshake' & maro hafa
Topazo maso ny 'Valanoranony' rehefa miala sasatra amin'ny fitsingevana amin'ny farihy maizina